Xogta MW Farmaajo ma oggolaan doono doorasho xalaal ah | SMC
Home WARARKA MAANTA Xogta MW Farmaajo ma oggolaan doono doorasho xalaal ah
Xogta MW Farmaajo ma oggolaan doono doorasho xalaal ah
​​​​​1. In Madaxweyne Farmajo sameeyay, mas’uul ka yahay sharcidarro, ku takrifal awood, la tashi la’aan joogto ah ee ka daran kuwii uu ku eedeynayay Shacbka soomaaliyeed waxay leeyihiin. Dambiga Madaxweyne Farmajo waa labo u jibbaar waayo wuxuu galay dambiyo uu horey u aqoonsana kuna eedeeyay Madaxweynihii ka horreeyay iyo dambiyo kale oo ka xun.
2. In doorashooyinkii ka dhacay Koofur Galbed, Hirshabelle, Galmudug ahaayeen kuwo ka xun dhinac walba kuwii dowladdii Xassan Sheikh xukunka looga qaaday. Xaqiiqada waxay tahay in mucaaradka loolan xoog leh la galeen Madaxweyne Xassan Sheikh inkastooasiga xitaa yaraysanin. Maanta waxaa la filayay in doorashada 2020 ay ka wanaagsanaato tii 2016.
Previous articleCiidamo Somali & Eritrean oo kuso wajahan Muqdisho